जनमतको कदर गर्ने कि ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / जनमतको कदर गर्ने कि ?
जनमतको कदर गर्ने कि ?
Posted by: युगबोध in विचार January 13, 2015	0 311 Views
जनमतको कदर गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न ग¥यो भने सबै राजनीतिक दल र सबै प्रजातन्त्रवादीहरुबाट एउटै उत्तर आउछ– ‘जनमतको कदर गर्ने’ भनेर तर भने जस्तो व्यवहारमा भएन अहिले २१ औं शताब्दीको युगमा संसारका धेरैजसो देशहरुले निरंकुश राजा महाराजाहरुलाई सत्ताच्युत गराएर लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिसकेका छन् र जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरुले नै देशको शासन सत्ता सम्हालेका छन् । साथै विश्वका सबैजसो देशहरुमा जनमतको कदर गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबैभन्दा बलियो शक्ति भनेको त्यहॉका जनता नै हुन्छन् र जनताको मतको आधारमा नै त्यहॉको शासन व्यवस्था चलेको हुन्छ भने हाम्रो देशमा त जनमतका कुरा बोल्ने बेलामा, लेख्ने बेलामा मात्रै लागु हुन्छ । तर व्यवहारमा भने अझै पनि लागु हुन सकेको छैन ।
प्रजातन्त्रको बहाली गर्ने भन्दै कैयौंपटक देशमा ठूला–ठूला आन्दोलनहरु भए । राजनीतिक दलहरुको गठन गरियो । दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा पनि भूमिगत भएर दलहरुले राजसंस्थाको बिरोधमा विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्दै रहे । फलस्वरुप वि.संं.२००७ सालमा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको बिजारोपण गरियो । २०१५ सालमा देशमा पहिलो आम निर्वाचन भयो र जनचिर्वाचित सरकार गठन भयो । बिडम्बना † राजा र दलहरु बीचमा तालमेल नमिल्दा अल्पायुमानै शिशु प्रजातन्त्र गुम्नुपुग्यो र देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । त्यस समयमा पनि राजनीतिक दलहरुबाट निर्दलीय व्यवस्थाको बिरोधमा भूमिगत आन्दोलनहरु हु‘दै गए । फलस्वरुप २०३६ सालमा नेपालमा निर्दल र बहुदलको बारेमा छिनोफानो गर्नलाई जनमत संग्रह घोषणा गरियो । २०३७ सालमा देशमा जनमत संग्रह हु‘दा निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा मत आए तापनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सरकार गठन गर्ने व्यवस्था बनाए र २०३८ सालमा देशमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यका लागि आम निर्वाचन गराएर जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर राजनीतिक दलहरुलाई भने यतिले मात्रै पुगेको थिएन र भित्रभित्रै कांग्र्रेस, कम्युनिष्ट सम्मिलित आन्दोलनहरु हु‘दै गए २०४६ साल चैत २६ गते राजा वीरेन्द्रबाट दलहरुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो । २०४८ सालमा पुनः देशमा दलहरुको सक्रियतामा आम निर्वाचन भयो । पुरानो व्यवस्थामा तल्लो स्तरका प्रतिनिधिबाट माथिल्लो स्तरका प्रतिनिधि छान्ने गरिन्थ्यो भने अब सिधै जननिर्वाचित प्रतिनिधि देशको कार्यकारिणी प्रमुख हुने र राजा संवैधानिक रुपमा सरकारको सल्लाह बमोजिम चल्ने अवस्थामा पुगे तर यतिले मात्रै पनि देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र आएको आभास हुन सकेन र राजसंस्थाको उन्मूलन नै गर्नुपर्ने र देशमा जनताबाट चुनिएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने माग राख्दै चरणबद्धरुपमा आन्दोलनहरु हु‘दै आए । जसअनुसार २०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्म १० वर्षे माओवादी आन्दोलन भयो । कैयौं सेना प्रहरी मारिए । त्यस्तै राजनीतिक कार्यकर्ताहरु, शिक्षक, कर्मचारी, ब्यापारीका साथै सर्वसाधारणले समेत ज्यान गुमाए । कैयौं माओवादी कार्यकर्ताहरु मारिए । देशको पुराना संरचनाहरु सबैजसो ध्वस्त पारिए र अन्तमा सबैजसो राजनीतिक दलहरुको एकमत भयो र राजाको बिरोधमा खनिए । परिणामस्वरुप २०६३ सालमा आन्दोलनकारीले विजय प्राप्त गरे । संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थालाई विधिवत रुपमा अन्त्य गरी देशमा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यी सब गतिविधिहरु जनताको जनमतको आधारमा गरिएका हुन् । जनताको मत जति ठूलो शक्तिशाली केही पनि हु‘दैन । विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने जनताको बलबाट नै ठूला–ठूला ऐतिहासिक परिवर्तनहरु भएका छन् । जनताकै मतको आधारमा देशका कानूनहरु बनेका छन् । हाम्रो देशमा पनि जनताले राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिएकाले नै यति ठूलो परिवर्तन भएको हो ।
जनताको मत बटुल्नका लागि नै देशमा निर्वाचन गराइन्छ । निर्वाचनमा जनताले निष्पक्ष तरीकाबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र जनताबाट आएको जनमतको निर्णय नै सर्वमान्य हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा व्यक्तिले निर्णयलाई मान्दैनांै भनेर जनमतलाई लत्याएर नानाथरि बोल्दै हि‘ड्छन् भने पक्कै पनि उनीहरु प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि जनताको निर्णयलाई नमान्ने हो भने किन लोकतन्त्र र गणतन्त्र किन ल्याउनु परेको थियो देशमा ? पुराना शासकहरु निरङ्कुश भए भनेर पटक–पटक जनतालाई किन सडकमा उतार्नुपरेको थियो ? जनताले आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितताको लागि साथ दिएका हुन् । भोक, रोग, अशिक्षा र अन्यायबाट पार पाउनका लागि साथ दिएका हुन् । वाक स्वतन्त्रताको लागि, प्रेस स्वतन्त्रताका लागि, मानवअधिकारको ग्यारेन्टीका लागि साथ दिएका हुन् जनताले । खाली नेतालाई माथि पु¥याउने भ¥याङ बन्न मात्रै जनताले दुःखकष्ट झेल्दै, बन्दुकको गोलीको पनि पर्वाह नगरी आन्दोलनमा होमिएका होइनन् । त्यस्तै देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि आफ्नो जीवनको बलिदान गर्ने वीर शहीदहरुले पनि यस्तो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र देख्न चाहेका थिएनन् । उनीले जनमतको कदर होस, जनताका निर्णय सर्वमान्य होस् भन्न चाहन्थे । आज विश्वको कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले जनताको निर्णयलाई लत्याएर आपूmखुशी राजनीतिक दल वा नेताहरुले देशको मूल कानून बनाउने बारेमा निर्णय लिन सकून् । यसको बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघबाट पनि निगरानी राख्नुपर्ने जरुरी हुन आउ‘छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा त्यहॉका जनता नै सर्वमान्य हुन्छन् । सबका मालिक हुन्छन् । जनताको बोली बन्दुकको गोली भन्दा पनि बलियो हुन्छ ।
आज विश्वका कैयौं शक्तिशाली शासकहरु जनताको समर्थन पाउन नसक्दा असफल भएर गएका छन् । बदनाम भएर गएका छन् । विश्वमा नै कलंकित भएका छन् उनीहरु । त्यसैले हाम्रो देश नेपालका ठूला राजनीतिक दल वा ठूला भनिने नेताहरुले पनि बडो दिमाग लगाएर सोच्ने बेला भएको छ कि जनमत भनेको के हो र यसको कदर कसरी गर्नुपर्छ भनेर । अझैसम्म पनि केही बिग्रिएको छैन । बेलैमा बुद्धि पु¥याइएन भने पछि पछुतो गरेर केही काम लाग्नेवाला छैन । जनता आत्तिएका छन् । जनताले धैर्य धारण गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल वा दलका नेताहरुको अग्निपरीक्षा गरिरहेका छन् । बर्षातको भेल उर्लिए झै जनता उर्लिए भने तपाइ‘हरुको हालत के होला, देशको व्यवस्था कतातिर मोडिएला ? छिमेकी मुलुकहरुले कसरी मूल्यांकन गर्लान् ? यसबारे चॉडोभन्दा चॉडो गम्भीर भएर लागौं र जनताले निर्वाचनमा दिएको म्यान्डेटअनुसार नै अगाडि बढौं ।
निर्वाचनको समयमा सबै राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र जनतासामु राखेकै छन् । एक वर्षमा नयॉ संविधान बनाएर दिन्छौं भन्ने बाचा कबुल गरेकै हुन् । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर देशलाई अग्रगतिमा पु¥याउ‘छौ भनेकै हुन् । त्यही उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा नै निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन् भने आज जनमत बटुल्न नसक्नेले किन जनमत पाएर विजय हासिल गर्नेलाई अवज्ञा गर्ने ? जसले बढी मत पाउ‘छ उसले जित्छ यो प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो । हार्नेले जित्नेको कुरा मान्नैपर्छ जनमतको कदर गर्नैपर्छ ।
Previous: हुलाक बैंकमा राखेको पैसा पाइन
Next: दिगो र सहभागितामूलक विकास